Wonke umuntu oye wanquma ukuchitha iholide e-Italy, ngokuqinisekile ufuna "poshopitsya" lendawo esidayisa yezitolo. funa okubalulekile izitolo e Florence. Noma yimuphi esidayisa (Florence) yithuba elikhulu ukuthenga ingubo abaklami abadumile, Bagatelle Antique noma ucezu zokuhloba ngesikhathi intengo imali khona futhi kunomoya wokuncintisana. Lokhu ukuthenga esitolo izobiza lushibhe kakhulu kunangesikhathi Boutique. Ngempela, ukuyothenga esidayisa kukhona imikhiqizo ephuma amaqoqo odlule, ngakho basuke okunengqondo ontengo yakhe yayinqunyiwe. Ngakho, ethenga e Florence, Italy izivakashi eziningi kungaba indlela enhle kakhulu futhi ukonga ukugcwala futhi ubuyekeze lezingubo, ukuhlobisa ikhaya lakho elingaphakathi ngaphandle shaking ngezinye izikhathi namahloni ibhajethi umndeni.
Jikelele imithetho yezitolo
Ngaphambi uvakashele esidayisa ethile (Florence), kufanele ujwayelene iziqondiso ezithile. Bazokusiza ukwenza ethenga inzuzo ngangokunokwenzeka ukuze ulondoloze isikhathi futhi thola kuphela imikhiqizo best. Into yokuqala udinga ukwazi - lwezikhathi ezitolo. Ziyakwazi evulekile kusuka ayisishiyagalolunye ekuseni kuze iri lobunane ebusuku. Ukudla kwasemini amakhefu eside kusukela ehoreni kuya ezinsukwini ezine.
Thola ukuthi ungasetha kanjani ukuya endaweni yokudayisa: iningi Florentine Izitolo babe amabhasi abo ukuthutha amaklayenti. Kodwa uma kungenzeka, sebenzisa imoto aqashiwe: izikole eziningi zitholakala ngandawonye, futhi kufanele uhambe. Ngakho-ke, ukuqasha imoto, zonke lula.
Ngosuku kokuqala yokuthengisa yezinkathi ezithile Izitolo njalo aminyene, ngakho-ke kungcono ukuzigcina ngosuku amasheya wesibili noma wesithathu. Njengomthetho, izibuyekezo zomkhiqizo zenzeke ngoLwezihlanu, ngakho uhla imikhiqizo ngoLwesithathu nangoLwesine ezitolo ubuncane. Kusukela eyesishiyagalombili 21 Agasti e Florence iholide, futhi-ke izitolo eziningi zivaliwe. Kuyadingeka ukuba ahlele uhambo lwakho ukuze angawi ngaphandle ngalesi sikhathi, ngaphandle kwalokho shopping yimpumelelo kuyoba kuphela iphupho.
Enye yezinhlangano ezinkulu kunazo Outlet Centres
Enye yezinhlangano ezinkulu kunazo zezitolo kuyinto "Barberino" - Outlet (Florence). Itholakala amakhilomitha 30 kusuka edolobheni. Isakhiwo kuyinto boutiques edolobheni elincane kanye amazing kanye ezozibonela ubuhle bayo kanye ohlukile Ensemble yezakhiwo. Outlet nge okufanayo Renaissance edolobheni. On endaweni eziyinkimbinkimbi entabeni emfuleni Seve. Nakuba umfula - kungcono igama inomsindo kakhulu, kusukela echibini icishe ifane kwakuye kwancipha. Isitolo kungokwalabo esigabeni sokunethezeka, ngoba ezigcawini ukuthengisa imikhiqizo ye enjalo emhlabeni brand odumile ezifana Furla, Missoni, Dolce & Gabbana, Prada nabanye abaningi.
Ngo Barberino eziyinkimbinkimbi ungathenga ingane imikhiqizo, electronics, isikhumba izimpahla, isikhumba izimpahla zasendlini izimpahla. Uma konke kuthengwa, ungakwazi adle cuisine Tuscan. Esikhathini enxanxatheleni yezitolo kukhona zokudlela eziningi kanye amathilomu, kanye ebaleni lokudlala nokuzilibazisa endaweni yezingane.
Indlela ukuya "Barberino"?
Esikhathini esidayisa ngenhla echazwe (Florence, Barberino esidayisa) engafinyelelwa ngemoto noma ngebhasi. Uma uthola umshini, kubalulekile ukuya A1 onguthelawayeka futhi ngalo ukuze uthole ophumayo Barberino di Mugello.
In the ukungabikho auto wokutakula ibhasi eya eziyinkimbinkimbi nsuku zonke. Kusukela Piazza della Stazione, 44 izindiza njalo uya ngqo eziyinkimbinkimbi "Barberino" futhi emuva. Adult ngoba lolo hambo kungadingeka akhokhe € 15, izingane ezingaphansi kweminyaka 14 zihambe, zikhululeke, kanye nabantu abasha usufinyelele lowo ubudala, akhokhe euro eziyisishiyagalombili zombili izinkomba.
Uma ungazange ukuphatha ukuze uthole ebhasini, ungahlala ukusizakala izimoto ezidlulayo.
Multibrand Outlet Tuscany
Outlet The Mall (Florence) - kungenye platform Ukuhweba, okuyinto intshisekelo Amazing izivakashi kanye kulabo abathanda yezitolo. Lokhu esidayisa ngokukhethekile imikhiqizo premium futhi isigaba okunethezeka. Ukuthenga ochwepheshe batusa abantu lapha abathengi banake lesikhumba izinto ungakwazi ukuthenga nge isaphulelo elikhulu. Futhi, lapho ngokuvamile emelelwa zezingane izingubo nezimpahla zasendlini. Phakathi brand ahlinzekwa, ungathola brand ezilandelayo: Fendi, Yves Saint Laurent, La Perla, Nguyenhanh nabanye abaningi.
Ukuze ngifike kuleyo Outlet The Mall izindlela ezintathu zokuthutha: emotweni, isitimela noma ibhasi. Uma anawo izivakashi imoto, kufanele niqhubeke ku A1 umgwaqo ovulekile aziwayo kakade futhi ukushayela ukuze ujike Incisa-Reggello, bese ufika Leccio - idolobha endleleni esuka lapho kukhona eziyinkimbinkimbi ethandwa.
Isitimela isuka esiteshini Santa Maria Novella. Udinga ukuya Rignano Sull'Arno esiteshini, lapho ukuthatha itekisi, okuyinto futhi uya khona liletha ngqo.
Futhi, zonke izinsuku kusukela maphakathi ibhasi esiteshini kuyinto ibhasi eyehlayo esitolo The Mall kanye emuva.
Outlet izaphulelo Amazing
yezitolo Italian (Florence) kungayiletha inzuzo kakhulu. Izitolo (ungafika kanjani ezinye zazo, oluchazwe ngenhla) kunikeza ithuba ukuthenga imikhiqizo ezimangalisayo nge Isaphulelo emangalisayo enkulu. Ngakho, ngo-yezitolo Valdichiana Outlet Village okwesikhathi izaphulelo unyaka kufika ku-70%. Lena ngenye yama ezitolo ngobukhulu ezweni futhi imikhiqizo yayo ese-imikhakha kwebhuloho kanye Esiphakathi. Lapha ungakwazi ukuthenga izicathulo, izingubo, ngaphandle lesikhumba izesekeli, yokukhanya namakha. Kodwa ngaphezu kwakho konke esitolo Valdichiana waziwa ukuthi unikeza uhla elikhulu amahora akubizi kodwa kakhulu.
Ukuze bafike kulesi eziyinkimbinkimbi futhi ube ukuhamba ngebhasi futhi isitimela, njengoba kungekho indiza ngqo.
"Fashion Valley" noma Fashion Valley (uphuma khona, Florence) - kuqhathaniswa entsha yezitolo, labavulekela ngoNovemba 2011. Lapha ungakwazi ukuthenga izingubo, umklami izingubo ekhaya, imikhiqizo zokuhloba kanye nezicathulo. Fashion Valley isakhiwo elicwengiweyo lathumela, okuyinto nje sehora kusukela enhlokodolobha Tuscan. Esidayisa itholakala ezingaphezu kwezingu-30 boutiques, elibonisa high izimpahla zikanokusho, kodwa engabizi kakhulu.
Unyaka wonke kukhona 30 - 70% isaphulelo futhi inkonzo khulula lomuntu siqu elinikezwa abakhuluma isiRashiya yezitolo consultant. Futhi esikhungweni it has a yokudlela nge umthamo abantu 180.
Uhlu ezinye izitolo ethandwa
Ngaphezu kwalezi Izitolo, e Florence kukhona eziningana zokuhweba amapulatifomu ukuthi kufanele avakashele:
Malo Factory Outlet - Outlet (Florence), etholakala eduze nedolobha. Indawo yokudlela abathengisa, ikakhulukazi igqoka owesilisa nowesifazane.
Dolce & Gabbana Outlet - itholakala emaphethelweni edolobha-dolobha Tuscany futhi kuyinto mono-brand yezitolo. I-isikhungo Isaphulelo ungathenga izingubo ezahlukene, izesekeli nezicathulo kusuka omunye wemikhiqizo edume kunazo zonke emhlabeni.
Mina Gigli - has 130 izitolo lapho ungakwazi ukuthenga izingubo kusukela brand Zara, uCalvin Clein nabanye. Kukhona Hypermarkets ezintathu.
Yini izivakashi bathini mayelana ezitolo Italian?
Izitolo Florence Izibuyekezo ziyajabulisa. Zonke zezivakashi ukuchitha amaholide abo esifundeni, qiniseka ukuvakashela Izitolo zendawo. Futhi wonke umuntu ujabule futhi yezitolo, futhi ukonga. Abantu abaningi bathi kulezi ezitolo bathenge izinto babephupha isikhathi eside. Ngenxa zibiza ukuthenga kubo kwakungenakwenzeka, kodwa sibonga Izitolo e Florence, bakwazi ukufeza izifiso zabo.
Ngaphezu kwalokho, izivakashi like isiko inkonzo kulezi izitolo kanye neqiniso lokuthi ezinye zazo uma uthenga ethile ku-akhawunti ikhadi umthengi emuva kumaphesenti athile imali wachitha.
Ziyisivikelo isikhwama - nesisekeli esidingekayo zikanokusho
Indlu okwenyanga ugodo: ukubuyekezwa kanye nezimiso yokwakhiwa